Spongebob Hamburger Love - Online
နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Spongebob Hamburger Love
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Spongebob Hamburger Love
ဖေါ်ပြချက်: SpongeBob နှင့်ပက်ထရစ်တောင်းဖို့အားလုံးကို Hambugers သယ်ကူညီပါနှင့်ပိုပြီးရမှတ်ရ။
ကစား: 32,604 tag ကို: Patrick ဂိမ်း, patrick, SpongeBob ဂိမ်း, SpongeBob, SpongeBob Squarepants, SpongeBob Squarepants ဂိမ်း, nickeleodeon, nickeleodeon games, လူ၏ nick ဂိမ်း
SpongeBob အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် VET ဆရာဝန်
Ice Cream Kitty ဆယ်ကျော်သက်မှ Mutant Ninja Turtles SpongeBob SquarePants ကနေခရု barnacles အားဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့အရည်ပျော်နှင့်ဂယ်ရီနေပါသည်! အိုမာအ venus ဟင်နရီအန္တရာယ်, ဂိမ်း Shakers နေမျှမျှတတ OddParents, Kujo မှစပါကီနှင့် Ge မှထောင်ချောက်ပျံသန်း
Block ကိုပါတီ 3, nick.com အပေါ်တစ်ဦးအခမဲ့အွန်လိုင်းမဟာဗျူဟာဂိမ်းထဲမှာတချို့ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းပျော်စရာအဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံး Nickelodeon ဇာတ်ကောင် Join! သင်အကြိုက်ဆုံး Nickelodeon ဇာတ်ကောင် Block ကိုပါတီ 3. Join ပြန်အစဉ်အမြဲထက်ပိုကောင်းအခမဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်း၌ရှိကြ၏
SpongeBob ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ Wonderland အီတာလျှံ
SpongeBob ဆောင်းရာသီ Wonderland Builder ။ ဒီပျော်စရာအွန်လိုင်းဂိမ်းထဲမှာရုံအားလပ်ရက်များအတွက်အချိန်အတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်မှော်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ Wonderland ကိုဖန်တီးပါ။ Nickleodeon ရဲ့ဆောင်းရာသီ Wonderland Builder, သင် yo နှင့်အတူပြည့်စုံသင့်ကိုယ်ပိုင်ပွဲလမ်းသဘင်နေအိမ်တည်ဆောက်မယ့်အခွင့်အလမ်း, get
လိုလားတဲ့ sk8r squarepants SpongeBob
SpongeBob Pro ကို Sk8r ။ အဆိုပါရေအောက်စကိတ်ကွင်းမှာ SpongeBob နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများက join ။ အလွတ်, လူမျိုး, Joust, ဒါမှမဟုတ်အမြင့်ဤနေရာသို့သွားရန်: လေးဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုကနေသင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ကစား Pick ။ မြင့်မားရမှတ်များနှင့်ညာဘက်ကွှားပွောရသူကိုကြည့်ဖို့သူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်။ အဖြစ်
က SpongeBob ခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါတယ် 2
ဒါဟာရေကူးဝတ်စုံနဲ့အောက်အတွက်ခရစ္စမတ်ပဲ! SpongeBob SquarePants: ဒါဟာတစ်ဦးက SpongeBob ခရစ္စမတ်ရဲ့အသငျသညျ SpongeBob ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်စုဆောင်းရေကူးဝတ်စုံနဲ့အောက်၏လူရှုပ်တက်အားပေးစရာကူညီဘယ်မှာပျော်စရာအားလပ်ရက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤပုံမှန်ခရစ္စမတ် gam မဟုတ်ပါဘူး
Nickelodeon ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပါတီ 2
သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင် Block ကိုပါတီ 2. ဒီပျော်စရာအရေးယူမှုဂိမ်းထဲမှာပျော်စရာ Join ပြန်အစဉ်အမြဲထက်ပိုကောင်းအခမဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်း၌ရှိကြ၏။ SpongeBob SquarePants, ပက်ထရစ်စတား, အဆိုပါဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles, Donnie, Mikey, Raph နှင့် Leo အဖြစ် Play
အချိန်အားဖြင့် squarepantsquestpants2မစ်ရှင် SpongeBob
SpongeBob SquarePantsQuestpants 2: အချိန်ကတစျဆငျ့မစ်ရှင်
ရေမျောနဲ့က Man Ray တက်ကိုပြသသည့်အခါသက်ကြီးရွယ်အိုကော်လံကလွဲနေတယ်သွားသွားရောက် SpongeBob နှင့်ပက်ထရစ်ရဲ့အစီအစဉ်။ သူတို့အသက်အရွယ်သိရှိရေးနေ့ကကျင်းပနိုင်အောင်သူတို့ကိုဒုက္ခထဲကထွက်ရကူညီပါ! SpongeBob SquarePan ခုနှစ်တွင်
SpongeBob squarepants သူရဲကောင်းရဲ့ရှေးခယျြမှု
ဒီမော်ကွန်း SpongeBob SquarePants စွန့်စားမှုဂိမ်းထဲမှာ DoodleBob သို့မဟုတ် ManRay အပေါ်ကိုယူ! SpongeBob သူရဲကောင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုသင်ဘီးကို ယူ. SpongeBob SquarePants နှင့်သူ၏ trusty sidekick အတူစွန့်စားမှုမောင်းထုတ်စေမယ့်တစ်ဦးအခမဲ့အွန်လိုင်းစွန့်စားမှုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်
Nickelodeon ဘောလုံးစတား SpongeBob မှသင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်, Teenage Mutant Ninja Turtles, Korra, Sanjay & Craig ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများနှင့် Breadwinners သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအစာရှောင်-paced အွန်လိုင်းဘောလုံးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ SpongeBob, ပက်ထရစ်, Donatello, Michelangelo အဖြစ် Play
Nickelodeon ဘတ်စကက်ဘောစတား SpongeBob မှသင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်, Teenage Mutant Ninja Turtles, Sanjay & Craig နှင့် Harvey နှုတ်သီးသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအစာရှောင်-paced အွန်လိုင်းဘတ်စကက်ဘောဒီဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ SpongeBob, ပက်ထရစ်, Donatello, Michelangelo, Raphael, Sanj အဖြစ် Play
အပြည့်အဝဂိမ်းနိုဝင်ဘာလ 2016 ခုနှစ်တွင်လွှတ်တင်မီကစူပါရန်ပွဲ World ၏လြှို့ဝှကျထှကျသှား peek ထွက်များစစ်ဆေး! Nickelodeon ရဲ့စူပါရန်ပွဲကမ္ဘာ့ဖလားကို Preview တစ်ဦးအခမဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းထဲမှာသင် SpongeBob SquarePants နှင့်အတူစူပါရန်ပွဲကမ္ဘာ့ဖလားထွက်စစ်ဆေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နှင့်
squarepants ဟယ်လိုဝင်းထိတ်လန့် frankenbobs ရှာပုံတော်2SpongeBob
Frankenbob အဖြစ် SpongeBob ၏ရှာပုံတော် Continue ယခင်ကတပြင်လုံးကိုမြို့မိကျောင်းသို့လှည့်ခဲ့သည်။ ဒီပရမ်းပတာနောက်ကွယ်တွင်သူသည်ထွက်ပုံ။ ဒီရူးသွပ်မှုကနေရေကူးဝတ်စုံနဲ့အောက်သာ SpongeBob လုပ်နိုင်တဲ့လမ်းကို save လုပ်ပါ။
squarepants ဟယ်လိုဝင်းထိတ်လန့် frankenbobs ရှာပုံတော် SpongeBob
SpongeBob FrankenBob သို့လှည့်ခံခဲ့သည်။ ဒါဟာဟယ်လိုအကြိုဖြစ်ပြီး, နေရောင်ကိုရေကူးဝတ်စုံနဲ့ Bottom အပေါ် setting ဖြစ်ပါတယ်။ အမှုန်အလငျး၌ ghastly တစ်ခုခုတပြင်လုံးကိုမြို့မိကျောင်းသို့ပြောင်းလဲနေသည်ရာအရပျကိုယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းတွေ, သချိုင်းသို့မြှုပ်ထားသောဇလှည့်ကြသည်
ဒီပျော်စရာအွန်လိုင်းဂိမ်းပဲဟယ်လိုအတှကျအခြိနျ၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင် spooky, ကြောက်စရာသရဲခြောက်တယ်လို့အိမျတျောကိုဖန်တီးပါ။ Nickleodeon ရဲ့သရဲခြောက်သောအိမ် Builder ခုနှစ်, သငျသညျ SP ကဲ့သို့သင်၏အကြိုက်ဆုံး Nickelodeon ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသင့်ကိုယ်ပိုင် spooky နေအိမ်, ဆောက်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရ
SpongeBob Questpants 3. သင်ပျံ Dutchman လေယာဉ်အမှုထမ်းများ၏တစ္ဆေပင်လယ်ဓားပြများ၏ရေကူးဝတ်စုံနဲ့အောက်ကယ်ဖို့တစ်ရှာပုံတော်အပေါ် SpongeBob နှင့်ပက်ထရစ်ပူးပေါင်းဘယ်မှာတစ်ဦးကလှုပ်ရှားမှုစွန့်စားမှုဂိမ်း။ သရဲတစ္ဆေနှင့်အတူစစ်ချီနှင့်ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်။ သငျသညျသတ္တိနှင့်ကယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့စမတ် Are
အဆိုပါ Krusty Krab အပြည့်အဝနှင့် SpongeBob ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောဖောက်သည်ထံမှအားလုံးတောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသီးအသီးဖောက်သည်များ၏ order ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အသီးအသီးကို client လိုအပ်ပါတယ်သမျှသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပါ။
SpongeBob သမုဒ္ဒရာ cleanup
သငျသညျရမှတ်ရရန်သူပစ်သောအခါ SpongeBob, သမုဒ်ဒရာထဲမှာစွန့်စားမှုရန်ရှိသည်သူ့ကိုပျံသန်းနှင့်ရိုက်ကူးအားလုံးနဂါး, ရွေ့လျားအပေါင်းတို့နှင့်တကွသမုဒ္ဒရာသန့်ရှင်းရေးကိုကူညီပေးပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ!
SpongeBob, mouse ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လက်ဝဲမျက်နှာပြင်မှာကျောက်ကိုရိုက်ကူးရဲ့ရွှေရှာတွေ့ပါစေကိုကူညီပါ။
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, SpongeBob ကယ်ဆယ်ရေး Patrice, လမျး, များစွာသောလည်းပင်လယ်မိကျောင်း SpongeBob ဖမ်းချင်, SpongeBob တစ်ဦးက key ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုကန်ကိုကူညီပေးပါတယ်။
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, SpongeBob တစ်ဦးရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်, သူကအတားအဆီးကိုရှောင်ရှားဖို့ရဟတ်ယာဉ်ကိုမောင်း။ play ဖို့အများကြီးအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။
SpongeBob, အကြွေစေ့စုဆောင်းအားလုံးရန်သူတိုက်ခိုက်နှင့်သူ၏မိတျဆှေ, ပက်ထရစ်ကယ်တင်ရန်ကိုကူညီပါ။ ပိုပြီးအာဏာကိုဝယ်ခြင်းငှါအကြွေစေ့ကိုသုံးပါ။
SpongeBob အပူဖောင်းပေါ်လမ်းလျှောက်ကူညီပါပြန်အိမ်ပြန်လာရာလမ်းကိုရှာပါ။ ရွှေ့ဖို့မြှား key ကိုသုံးပါ။
ဒီခရစ်စမတ်မှာ, SpongeBob နှင့်ပက်ထရစ်သမုဒ္ဒရာစူးစမ်းနှင့်ငါးဖမ်း။ သူ့ကိုဒီမစ်ရှင်ပြီးအောင်နှင့်ပိုပြီးရမှတ်ရကိုကူညီပါ။
SpongeBob နှင့်ပက်ထရစ်လေယာဉ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်သင့် mouse ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အိမ်ပြန်ဖို့လေယာဉ်ပေါ်ပျံတက်ကိုကူညီပါ။